﻿ ‘परिवारको प्रेरणाले शैक्षिकसँगै सामाजिक संस्थामा सक्रिय छु’
बिहीबार १८, भदौ २०७७
सफल पौडेल इटहरीस्थित सनसाइन स्कुल अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्टका सञ्चालक हुन् । सानैदेखि घुम्ने, नयाँ मानिसहरुसँग कुराकानी गर्ने अनि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय हुने इच्छा बमोजिम उनले यो स्कुल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । व्यवशायका साथै जेसिज तथा लियो क्लबमार्फत् सामाजिक काममा पनि सक्रिय पौडेलसँग न्युजलयका लागि ज्योति पोख्रेलले गरेको कुराकानी :
अहिले लकडाउनको स्थिती छ । यस्तो बेलामा म खानेकुरा प्रति अलि बढि रुचि भएकोे मान्छे भएकोले अहिले नयाँ कुराहरु सिक्दै, घरमै अभ्यास गर्दै बस्दै छु । यसको साथसाथै सामाजिक संघसस्थामा पनि आबद्ध भएर समाजको लागि विशेष समय दिइरहेको छु । डेढ वर्ष भयो कलेज सञ्चालन गरेको छु, त्यसको व्यवस्थापनमा पनि सक्रिय छु ।
युवा हुनुहुन्छ, कोबाट प्रेरित भएर कलेज सञ्चालनमा लाग्नु भयो ?
जेसिसमा पनि आबद्ध भएको हुनाले सानैदेखि धेरै उद्यमशिलताहरुको तालिमहरु लिने, प्रेरणादायी भाषण सुन्ने गर्थेँ । त्यस्तै अरु सफल व्यक्तित्वहरुको जीवनबाट प्रेरित भएर सानै उमेरदेखि आफ्नै देशमा केहि गर्नुृपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यहि सोँचले नै म नेपाल फर्केर आएको हो विदेशबाट । अनि मेरो चाहिँ परिवार नै शैक्षिक संस्थामा आबद्ध भएको हुनाले त्यहिबाट प्रेरणा भयो ।
कलेज सञ्चालन गर्न सुरुवातका दिनहरुमा के कस्ता समस्याहरु आए ?
जुनसुकै काममा हात हाल्दा कमजोरी र सबल पक्ष मज्जाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । म होटल म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी भएको हुनाले मलाई गणित, बिज्ञान जस्ता विषय मनै नपर्ने । त्यसैले फाइनान्स, म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा एकदमै समस्या आएको थियो । तर बिस्तारै मेरो पार्टनरहरुको सहयोगले गर्दा बुझ्दै गएँ ।
होटल म्यानेजमेन्ट क्षेत्र नै किन रोज्नुभयो ?
मलाई सानै देखि होटल स्थापना गर्ने सपना थियो । त्यहि अनुसार मैले ब्याचलर लेबलमा होटल म्यानेजमेन्ट पढेँ । नयाँ मान्छेहरुसँग बोल्ने, आफ्नो केहि कुराहरु ब्यक्त गर्ने, नयाँ कुरा सिक्ने अनि विभिन्न देशहरु घुम्ने काम मनपर्ने हुँदा मैले यो क्षेत्र रोजेको हुँ ।
अहिले कोरोनाको महामारी छ । यस्तोमा कलेजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
पर्यटन र शिक्षासँग सम्बन्धित भएकोले अहिले कलेजलाई असर गरेको छ । होटल म्यानेजमेन्ट पढाएपछि नेपालमा मात्रै नभएर बाहिर विदेशसमेत पठाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको अबस्थामा र होटेलहरु नचलेको अवस्थामा एकदमै गाह्रो भैरहेको छ । लकडाउन पछि यो क्षेत्र झन् ब्यापक रुपमा फैलनेछ भन्ने आशा भने छ । स्थिती राम्रो हुने प्रतिक्षामा छौं ।
तपाईको कलेजका विशेषताहरु के छन् ? विद्यार्थीले तपाईकै कलेज किन रोज्ने ?
हामीसँग होटल म्यानेजमेन्टको एउटा टिम छ । शिक्षकहरु काम र पढाई दुई वटा मै अनुभवी हुनुन्छ । कलेजमा पुर्वाधार स्तरीय छ । सैद्धान्तिकभन्दा व्यवहारीक सिकाईमा बढि ध्यान दिन्छौँ । यस पटकको शैक्षिक सत्रमा ७० प्रतिशत प्राक्टिकल र ३० प्रतिशत थ्योरी पढाउने योजना छ । ४ दिन कलेजमा पढाउने र बाँकी २ दिन विभिन्न होटलहरुमा इन्टर्न गराउने योजना छ ।
अहिलेसम्म कति विद्यार्थी उत्पादन भए ?
हाम्रोमा डिप्लोमेटिक होटेल म्यानेजमेन्ट पढाई हुने हो । पहिलो ब्याच ६ महिनाको हुन्छ । त्यसमा लगभग २५ जना उत्तीर्ण भएर ईन्टर्नसिप जानेबेलामा कोरोनाले गर्दा अहिले रोकिनुभएको छ । दोस्रो ब्याचमा १२ जना विद्यार्थी भर्नाभएर पढीरहनुभएको छ । हामीसँग अरु सर्ट टर्म कोर्षहरु जस्तै वरिष्ता, कफि मेकिङ, बार टेन्डिङ पनि सिकाइन्छ । यस्ता सर्ट टर्म तालिम लिएर इटहरी, धरान, भेडेटार, विराटनगरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गरीराख्नु भएको छ ।
सामाजिक काममा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ ?
बुवा, आमा सबै सामाजिक संघसंस्थामा सक्रिय भएकोले पनि मलाई सामाजिक काममा सक्रिय हुने प्रेरणा मिलेको हो । म अहिले इटहरी जेसिसको उपाध्यक्ष र लियो क्लब अफ इटहरी सिटिको अध्यक्षको रुपमा सक्रिय छु । क्लबबाट यो वर्ष २००० वटा बिरुवा रोप्ने योजना छ । साथै कोरोनाको कारणले युवाहरुमा डिप्रेसन बढिरहेकोले यो वर्ष योग, ध्यान का कार्यक्रम ल्याउने, मायाघर इटहरीमा मेहेन्दि लगाउने कार्यक्रम गरिसकेका छौं ।
अन्त्यमा सम्पुर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले शैक्षिक संस्था बन्द छ । यस्तोमा नेपाल सरकारले घरभाडा छुट गरीदिए हामीलाई प्रेरणा मिल्ने थियो । साथै म मेरो विद्यार्थीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोना बिस्तारै सकिनेछ । त्यसपछि तपाईहरुले राम्रो ठाउँमा काम पाउनुहुनेछ । त्यसैले हतोत्साही नभइ अध्ययन र सिकाइलाई जारी राख्न अनुरोध छ ।